Microsoft Excel Basics Dzidziso - Kudzidza Maitiro Ekushandisa Excel
Mune chinyorwa chakanyorwa muna 2018, Robert Half, kambani inoshandira zviwanikwa zvevanhu neindasitiri yezvemari, akanyora izvozvo 63% yemafemu emari anoramba achishandisa Excel mukutanga. Ichokwadi, izvo hazvisi 100% uye zvinonyatsofungidzirwa kuve kuderera mukushandiswa! Asi kutarisa software iyi software yekuparadzira uye isina kugadzirwa chete seyunivhesiti yemari, 63% ichiri chikamu chakakosha cheindasitiri uye inobatsira kuratidza kukosha kweExcel.
Kudzidza mashandisiro Ekushandisa Excel hakufanirwe kuve kwakaoma. Kuitora iyo nhanho imwe panguva ichakubatsira iwe kufamba kubva kune novice kuenda kune nyanzvi (kana kuti zvishoma padyo nepfungwa iyoyo) - padanho rako.
Sechiono cheizvo zvatichazopura muchinyorwa chino, funga mapepa ekushandira, zvekushandisa zvinoshanda uye mafomula, uye uchitsvaga pepa rekushandira kana bhuku rekushanda. Ichokwadi, isu hatingazovhara zvese zvinobvira basa reExcel asi isu tichafukidza zvakakwana izvo zvinokupa iwe zano rekuti ungataura sei nevamwe.
Izvo zvinobatsira chaizvo kana tichivhara tsanangudzo shoma. Kupfuura zvingangodaro, iwe wakanzwa aya mazwi (kana kuti watoziva zvaari). Asi isu tichavafukidza kuti vave nechokwadi uye tigova tese set for the rest of the process mukudzidza mashandisiro Excel.
Mabhuku ebasa vs. Mabhuku Ekushandira
Zvinyorwa zveExcel zvinodaidzwa kuti Mabhuku ebhuku uye kana iwe uchinge watanga kugadzira gwaro reExcel (iro bhuku rekushanda), akawanda (kwete ese) maExcel zvinyorwa zvinongoerekana zvabatanidza matatu matatu, rimwe nerimwe riine pepa rechishongedzo charo. Kana yako vhezheni yeExcel isingaiti izvo, usazvidya moyo, isu tidzidza maitiro ekugadzira ivo.
Tsvaga mutsauko pakati peGoogle Sheets neMicrosoft Excel Workbooks
Ma worksheets ndiwo iwo chaiwo zvikamu zvaunopinda iwe data. Kana zviri nyore kuzvifunga nezvazvo, funga nezvemapeji ekushandira seaya matabhu. Iwe unogona kuwedzera ma tabo kana kudzima ma tabo nekudzvanya-kurudyi nekusarudza sarudzo yekubvisa. Iwo mapepa ebasa ndiwo maspredishiti chaiwo atinoshanda nawo uye anoiswa mufabook rebhuku faira.
Iyo Ribbon inowaridza mhiri kweExcel application senge mutsara wepfupi, asi mapfupi ayo anomiririrwa zvinoratidzwa (pamwe nerondedzero yezvinyorwa). Izvi zvinobatsira kana iwe uchida kuita chimwe chinhu munguva pfupi uye kunyanya kana iwe uchida kubatsirwa kuona zvaunoda kuita.
Kune kwakasiyana kurongeka kwebhabhatani mabhatani zvinoenderana nechikamu chei / boka raunosarudza kubva pane yepamusoro menyu sarudzo (sekuti Pamba, Pinza, Dhata, Ongorora, nezvimwewo) uye sarudzo dzinoonekwa dzakanangana nemapoka iwayo.
Shortcuts anobatsira mukutsvaganisa iyo Excel software nekukurumidza, saka zvinobatsira (asi hazvinyatso kukosha) kuti mudzidzidze. Vamwe vacho vanodzidziswa nekuona iwo mapfupi akanyorwa mumamenyu ezvinyorwa zvekare zveExcel application uye wozozviyedza wega.
Imwe nzira yekudzidza Excel mapfupi ndeyekutarisa rondedzero yavo pane webhusaiti yeExcel vanogadzira. Kunyangwe kana yako vhezheni yeExcel isingaratidze mapfupi, mazhinji acho achiri kushanda.
Maitiro vs. Mabasa
Mabasa akavakirwa-mukati ekugona kweExcel uye anoshandiswa mune mafomula. Semuenzaniso, kana iwe waida kuisa formula yakaverenga huwandu hwenhamba mumasero akasiyana echitambanudzirwa, iwe unogona kushandisa basa SUM () kuita izvozvo chaizvo.
Zvizhinji pane ichi basa (uye mamwe mabasa) zvishoma mberi pane ichi chinyorwa.
Iyo formula bar inzvimbo inoratidzika pasi peRibbon. Iyo inoshandiswa kune mafomula uye data. Iwe unopinda iyo data muchitokisi uye inozoonekawo mu formula bar kana iwe uine mbeva yako muchitokisi icho.
Patinongedzera formula bar, isu tiri kungoratidza kuti isu tinofanirwa kunyora formula munzvimbo iyoyo paine foni yakakodzera yakasarudzwa (iyo, zvakare, zvichaitika zvoga kana ukasarudza sero wotanga kunyora).
Kugadzira & Kugadzira Rwekushandira Semuenzaniso
Pane zvinhu zvakawanda zvaungaita neExcel Worksheet yako. Isu tichakupa mamwe matanho emuenzaniso patiri kuenda pamwe muchinyorwa chino kuti iwe uzviedze wega.
Bhuku rekutanga reBasa
Izvo zvinobatsira kutanga neBhuku Risina basa. Saka, enda mberi uye sarudza New. Izvi zvinogona kusiyana, zvichienderana neshanduro yako yeExcel, asi kazhinji iri mukati faira Nzvimbo.
Ongorora: Mufananidzo uri pamusoro unoti Open kumusoro kuratidza kuti iwe unogona kusvika kune New (kuruboshwe-kuruboshwe ruoko, rwakanangidzirwa kune iyo museve wakasvibira) kubva chero kupi. Iyi ipikicha yeiyo nyowani Excel.
Paunenge uchibvira New uri kupfuura ungangoenda kunotora mamwe matemplate. Iwo matemplate pachavo anogona kusiyana pakati peshanduro dzeExcel, asi iwe unofanirwa kuwana imwe yemhando yekusarudzwa.
Imwe nzira yekudzidza kushandisa Excel ndeyekutamba nevaya matemplate uye nekuona chinoita kuti "vabate". Kune chinyorwa chedu, tiri kutanga negwaro risina chinhu uye kutamba uchitenderera nedata uye mafomula, nezvimwe.
Saka enda mberi uye sarudza isina gwaro gwaro sarudzo. Iyo interface ichasiyana, kubva kuhumhanduko kuenda kune shanduro, asi inofanira kunge yakafanana zvakakwana kuti uwane iyo pfungwa. Nguva shoma gare gare isu tichatorawo imwe sampuli Excel pepa.
Kuisa iyo data
Kune nzira dzakawanda dzakasiyana dzekuti uwane data mune yako spreadsheet (aka worksheet). Imwe nzira ndeyekunyora zvaunenge uchida paunoda. Sarudza sero chairo uye wototanga kunyora.
Imwe nzira ndeyekutevedzera data wobva waiisa muSpreadsheet yako. Ichokwadi, kana iwe uchikopa iyo data isiri mufurafura yemafomu inogona kuwana zvishoma zvinonakidza kuti painowira kupi mugwaro rako. Asi nerombo rakanaka tinogona kugara tagadzira gwaro racho uye kuronga uye kunama kumwe kunhu, sezvazvinodiwa.
Iwe unogona kuedza kutevedzera / kurongedza nzira izvozvi nekusarudza chikamu cheichi chinyorwa, kuchikopa, uye wozokatanamira mupepa rako risina chinhu.
Mushure mekusarudza chikamu chechinyorwa uye nekukopa, enda kune rako rekuparadzira uye wobva wadzvanya pasero raunoda iwe kwaunoda kutanga pasita woita saizvozvo. Maitiro akaratidzirwa pamusoro apa ari kushandisa kurudyi-kudzora menyu wozosarudza "Namatisa" muchimiro chechiratidzo.
Izvo zvinogoneka kuti iwe unogona kuwana chikanganiso kana uchishandisa Excel yakavakirwa-mukukama nzira, kunyangwe iine dzimwe nzira dzeExcel dzakavakirwa-mukati zvakare. Neraki, iyo yambiro yekukanganisa (pamusoro) inobatsira kukunongedza munzira yakakodzera kuti uwane iyo data yaunoteedzera mune bepa.
Paunopfuudzira iyo data, Excel inoita basa rakanaka kwazvo rekuidudzira. Mumuenzaniso wedu, ini ndakateedzera maviri ekutanga aya echikamu ichi uye Excel akaiisa mumitsara miviri. Sezvo paive paine chaicho nzvimbo pakati pemakenduru, Excel yakahwirudzawo izvo zvakare (nekaraira isina chinhu). Kana iwe uri kutevedzera tafura, Excel inoita kunyange iri nani basa rekuisazve mupepa.
Zvakare, unogona kushandisa bhatani riri muRibbon kunama. Kune vanhu vanoona, izvi zvinobatsira chaizvo. Iyo inoratidzwa mumufananidzo uri pasi apa.
Dzimwe shanduro dzeExcel (kunyanya vhezheni shanduro) dzinokutendera iwe kuendesa dhata (inoshanda zvakanyanya nemaficha akafanana kana CSV - matema akapatsanurwa - mafaira). Dzimwe shanduro dzeExcel nyowani hadzina izvozvo asi unogona kuzarura iyo imwe faira (iyo yaunoda kuendesa), shandisa Sarudza zvose uye wobva wateedzera uye wobva waisa mune yako Excel spreadsheet.
Kana kunze kuchiripo, inowanzowanikwa pasi pe faira menyu. Mune iyi vhezheni itsva (s) yeExcel, unogona kudzoserwa kune imwe yemifananidzo mushandisi kana iwe uchitsvaga pa faira. Ingo pinza museve kumusoro kumusoro kuruboshwe kuti udzokere kune yako yekushandira.
Hyperlinking iri nyore nyore, kunyanya kana uchishandisa Ribbon. Iwe uchawana iyo hyperlink bhatani pasi pe Insert menyu mune idzva Excel shanduro. Iyo inogona zvakare kuwanikwa kuburikidza nejira rakapfupika senge command-K.
Kuumbwa Kwedata (Muenzaniso: Nhamba uye Mazuva)
Dzimwe nguva zvinobatsira kurongedza data racho. Izvi zvinonyanya kuitika nehuwandu. Sei? Dzimwe nguva manhamba anongoerekana anowira mune yakajairika fomati (mhando yekukasira) iyo yakawanda senge fomati yemavara. Asi kazhinji, tinoda kuti manhamba edu aite sehuwandu.
Mumwe muenzaniso ingava misi, iyo yatingave tichida kuti ifomotwe kuitira kuti titi tese mazuva edu anoratidzika kunge akapindirana, kunge 20200101 kana 01/01/20 kana chero chimiro isu chatinosarudza chedu fomati.
Iwe unogona kuwana iyo sarudzo yekugadzirisa data yako mune zvishoma nzira dzakasiyana, inoratidzwa mune pazasi mifananidzo.
Kana uchinge wawana, taura nhamba fomati, iwe uchave nesarudzo dzinoverengeka. Idzi sarudzo dzinooneka paunoshandisa nzira yekubaya-kurudyi. Paunoshandisa iyo Ribbon, zvaunosarudza zviri ipapo muRibbon. Izvo zvese zvinoenderana nekuti ndeipi iri nyore kwauri.
Kana iwe uchinge uchishandisa Excel kwechinguva, iyo-kurudyi yekudzvanya nzira, ine yakakonzera nhamba format dialog bhokisi (inoratidzwa pazasi) ingave nyore kunzwisisa. Kana iwe uri mutsva kana zvakanyanya kuoneka, iyo nzira yeRibbon inogona kuita kuti iwedzere kuita pfungwa (uye inokurumidza kushandisa). Zvese zviviri zvinokupa iwe nhamba dzekufomata sarudzo.
Kana iwe ukanyora chero chinhu chakafanana ne date, iwo manyowani maBhaibheri eExcel akanaka zvakakwana kuratidza izvo muRibbon sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi.
Kubva kuRibbon iwe unogona kusarudza mafomu ezuva rako. Semuenzaniso, unogona kusarudza pfupi pfupi kana zuva refu. Enderera mberi uzviedze uye utarise mhinduro dzako.
Mharidzo Yemafomati (Muenzaniso: Kuenzanisa Zvinyorwa)
Izvo zvakare zvinobatsira kuti unzwisise kugadzirisa matanho ako, kana iwe uchida kuti zvese zviteedzere kuruboshwe kana kurudyi (kana kururamisa, nezvimwewo). Izvi zvakare zvinogona kuwanikwa kuburikidza neRibbon.
Sezvauri kuona kubva pamifananidzo iri pamusoro, kuwiriraniswa kwezvinyorwa (kureva kurudyi, kuruboshwe, nezvimwewo) uri pamutsetse wechipiri weRibbon sarudzo. Iwe unogona zvakare kusarudza dzimwe sarudzo dzekuenzanisa (kureva kumusoro, pasi) muRibbon.
Zvakare, kana iwe uchicherekedza, kuenzanisa zvinhu senge nhamba zvingasaratidzika kurudyi kana zvichiratidzwa kuruboshwe (uko rugwaro runotaridzika zviri nani) asi runotaridzika zviri nani kana rwakanyatsorudyi Iko kurongedza kwakafanana chaizvo neizvo iwe waizoona mune izwi kugadzirisa application.
Izvo zvinobatsira kuziva maitiro ekushanda nawo, zvakare chinja upamhi uye hupamhi zve, mbiru nemisara. Neraki, kana iwe uchinge wawana ichocho, zviri nyore kuita.
Pane zvikamu zviviri zvekuwedzera kana kudzima mitsara kana makoramu. Chikamu chekutanga sarudzo yekusarudza uye imwe yacho ndiyo yekudzvanya-kurudyi nekusarudza yekuisa kana yekubvisa sarudzo.
Rangarira iyo data yatinoteedzera kubva kuchinyorwa ichi uye takanamatira mune yedu isina chinhu Excel sheet mune iri pamusoro muenzaniso? Isu pamwe hatichazvida zvekare saka ndiyo muenzaniso wakakwana wekuita basa rekudzima mitsara.
Rangarira yedu yekutanga nhanho? Isu tinofanirwa kusarudza mitsara. Enda kumberi wobva wadzvanya pane mutsara nhamba (kuruboshwe kweseri kuruboshwe) uye dhonza pasi pasi negonzo rako kusvika pasi iro raunoda kudzima. Munyaya iyi, tiri kusarudza mitsara mitatu.
Zvadaro, chikamu chechipiri chemaitiro edu ndechekubaya Delete Rows uye tarisa Excel bvisa mitsara iyo.
Maitiro ekuisa mutsara wakafanana asi iwe haufanirwe kusarudza anodarika mutsetse mumwe. Excel ndiyo inozivisa kuti unocheka kupi iwe kwaunoda kuisa mutsara.
Kutanga kuita kwacho, tinya pane iyo nhamba yenhamba yaunoda kuti ive pasi pemutsara mutsva. Izvi zvinotaurira Excel kuti isarudze iyo yose mutsetse. Kubva panzvimbo paunenge uri, Excel inoisa mutsara pamusoro iyo. Unoita nekudzvanya-kurudyi nekusarudza Pinza Mbambo.
Sezvauri kuona pamusoro, isu typed 10 mumutsara 10. Ipapo, mushure mekusarudza 10 (mutsara 10), kurudyi-kudzvanya, uye kusarudza Pinza Mbambo, nhamba gumi dzakadzika mutsara mumwe. Izvo zvakaguma zva 10 ikozvino kuve mumutsara 11.
Izvi zvinoratidza kuti mutsetse wakanyorwa waiswa sei pamusoro pemutsara wakasarudzwa. Enderera mberi uzviedze wega, kuti iwe uone kuti maitiro ekuisa anoshanda sei.
Kana iwe uchida kudarika mutsara mumwe, iwe unogona kuzviita nekusarudza kupfuura mutsara mumwe uye izvi zvinotaurira Excel kuti vangani vaunoda uye kuti huwandu ugoiswa mukati memutsara nhamba yakasarudzwa.
Mifananidzo inotevera inoratidza izvi mune inoonekwa chimiro, kusanganisira sei iyo 10 yakadzika mitsara mitatu, iyo nhamba yemitsara yakaiswa.
Kuisa uye kudzima columns ndiko kwakafanana kunze kwekuti iwe uri kusarudza kubva kumusoro (columns) panzvimbo yekuruboshwe (mitsara).
Mafirita & zvakapetwa
Kana isu tine yakawanda data yekushanda nayo inobatsira kana isu tine mashoma emano emikono yemasaga edu kuti tigone kushanda nyore neiyo data.
Semuenzaniso, ngatiti iwe une boka re data yemari asi iwe chete unofanirwa kutarisa kune chaiyo data. Imwe nzira yekuita izvozvo ndeye kushandisa Excel "Filter."
Kutanga, ngatitsvagei Excel Worksheet iyo inopa yakawanda data saka isu tine chimwe chinhu chekuyedza izvi pa (pasina kutapa iyo yega data isu). Unogona dhawunirodha yakadaro sampuli kubva kuMicrosoft. Ramba uchifunga kuti ndiyo yekunongedza yakanangana neyekuburitsa saka iyo Excel yemuenzaniso faira inofanira kutanga kurodha ipapo ipapo kana iwe uchidzvanya pane iyo link.
Zvino zvatava negwaro, ngatitarise huwandu hwe data. Zvishoma hazvo, handizvo? Ongorora: mufananidzo uri pamusoro ucharatidzika zvishoma zvakasiyana nezvauinazvo mune yako sampu faira uye izvo zvakajairika.
Ngatiti iwe waingoda kuona data kubva kuGermany. Shandisa iyo "Svina" sarudzo muRibbon (pasi pe "Imba"). Yakasanganiswa ne "Sort" sarudzo kuenda kurudyi (mune idzva Excel shanduro).
Iye zvino taura Excel kuti ndedzipi sarudzo dzaunoda. Mune ino kesi, isu tiri kutsvaga data paGerman senyika yakasarudzwa.
Iwe uchaona kuti paunosarudza iyo yefaira sarudzo, miseve-pasi miseve inoratidzika mumakoramu. Kana museve wakasarudzwa, unove nesarudzo dzinoverengeka, kusanganisira iyo ye "Mesefa Mafirita" sarudzo yatichave tichishandisa. Iwe une sarudzo yekugadzirisa kukwira kana kuburuka.
Izvo zvine musoro nei Excel ichivhenganisa idzi muRibbon sezvo zvese izvi zvsarudzo zvinoratidzika mune yekudonha-pasi runyorwa. Isu tichave tichisarudza ma "zvakaenzana ..." pasi pe "Zvinyorwa Zvidimbu."
Mushure mekusarudza izvo zvatiri kuda kuita (mune ino Chidimbu), ngatipe izvo ruzivo / maitiro. Tinoda kuwona data yese kubva kuGermany saka ndizvo zvatino nyora mubhokisi. Wobva wadzvanya kuti "Zvakanaka."
Iwe uchaona kuti ikozvino isu tinongoona data kubva kuGermany. Iyo dhata yakaiswa. Iyo imwe data ichiripo. Chakavanzika chete kubva pakuona. Ichauya nguva iyo iwe yaunoda kurega iyo firita uone iyo yese data. Ingo dzokera kune dhizaini-pasi uye sarudza kujekesa fafitera, sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi.
Dzimwe nguva iwe uchave uine seti yedata inosanganisira iyo duplicate data. Zviri nyore kwazvo kana uchingove uine imwe chete data. Semuenzaniso, nei iwe ungade iyo chaiyo yakafanana data data rekodhi kaviri (kana kupfuura) mune yako Excel Worksheet?
Pazasi pane muenzaniso wedatha yakaiswa iyo ine imwe data iyo inodzokororwa (inoratidzwa yakatsanangurwa yero).
Kuti ubvise zvakapetwa (kana zvimwe, sezvazvakaita iyi), tanga nekudzvanya pane imwe yemitsara inomiririra duplicate data (iro rine data rinodzokororwa). Izvi zvinoratidzwa mumufananidzo pazasi.
Zvino, shanyira "data" tab kana chikamu uye kubva ipapo, unogona kuona bhatani pane Ribbon rinoti "Bvisa Zvinyorwa." Dzvanya izvo.
Chikamu chekutanga cheichi chiitiko chinokupa iwe nebhokisi rekutaura rakafanana nezvawaona mumufananidzo uri pazasi. Usarege izvi zvichikuvhiringidza. Iko kunongokubvunza iwe iyo iyo ikholamu kuti utarise kana uchizivisa duplicate data.
Semuenzaniso, dai iwe uine mitsara yakati wandei ine zita rekutanga nerekupedzisira asi zvakanyanyisa kubhejera mune mamwe makoramu (semufananidzo / kopi webhusaiti webhusaiti) uye iwe waingoda mitsara yakasarudzika yezita rekutanga uye rekupedzisira, iwe waizosarudza iwo makoramu kuitira kuti gibberish iyo ingave isingaverengeki haina kuuya mukufunga mukubvisa iyo yakawandisa data.
Mune ino nyaya, isu takasiya kusarudzwa se "makoramu ese" nekuti isu taive takadzokorodza mitsara pamawoko saka isu taiziva kuti iwo ese mapepa aive akafanana mumuenzaniso wedu. (Iwe unogona kuitawo saizvozvo neExcel muenzaniso faira woiedza.)
Mushure mekudzvanya "Zvakanaka" pane iri pamusoro bhokisi dialog, iwe uchaona mhedzisiro uye mune iyi kesi, mitsara mitatu yakaonekwa yakafanana uye mbiri dzayo dzakabviswa.
Zvino, iyo yakakonzera iyo data (inoratidzwa pazasi) inoenderana ne data ratakatanga isu tisati tapfuura nekuwedzera uye kubviswa kwezvinyorwa.
Iwe uchangobva kudzidza mashoma emano. Izvi zvinonyanya kubatsira kana uchibata nehombe datha. Enderera mberi uye edza mamwe mabhatani aunoona paRibhoni uye uone zvavanoita. Iwe unogona zvakare kudzokorora yako Excel muenzaniso faira kana iwe uchida kuchengetedza fomu yekutanga. Tora zita refaira rawakaodha wobva warodha zvakare imwe kopi. Kana kudzokorora faira racho pakombuta yako.
Chandakaita ndechekunyora iyo tabu neyemese data yezvemari (mushure mekuikopera mune yangu yemumwe muenzaniso faira, iyo yatakatanga nayo yaive isina chinhu) uye neyekudzokorora tebhu yandakanga ndine shanduro mbiri yekutamba nayo mukuda. Iwe unogona kuedza izvi nekushandisa kurudyi-pfuura pane iyo tabhu nekusarudza "Dzokorora."
Ichi chikamu chechinyorwa chinosanganisirwa muchikamu pamusoro pekugadzira iro Bhuku Rekushandisa nekuda kwemabasa aro ekuratidza. Kana zvichiratidzika kunge zvishoma zvakaoma kana kuti uchitsvaga mashandiro uye mafomati, ruka chikamu ichi uye udzokere kwairi pakuzorora kwako.
Mamiriro Ekuumbwa ari kuita kana iwe uchida kuratidza imwe data. Mumuenzaniso uyu, tiri kuzoshandisa yedu Excel Muenzaniso faira (neyemese data yemari) uye tarisa "Yese Kuburitsa Kutengesa" inodarika madhora zviuru makumi maviri.
Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kutanga tasimbisa boka remasero ratiri kuda kuongororwa. Zvino, ramba uchifunga, iwe haudi kuratidzira iyo yose ikholamu kana mutsara. Iwe unongoda kuratidza chete maseru aunoda kuongororwa. Zvikasadaro, mamwe maseru (semusoro) anozoongororwawo uye iwe ungashamisika zvinoitwa naExcel nemisoro iyoyo (semuenzaniso).
Nekudaro, isu tine masero edu anodiwa akaratidzwazve uye tinobva tinya pa "Pamba" chikamu / boka uye tozo "Mamiriro Ekuita."
Kana tikabaya pakanzi "Conditions Formatting" muRibbon, isu tine dzimwe sarudzo. Muchiitiko ichi tinoda kuratidza masero akakura kupfuura madhora zviuru makumi maviri nezvishanu saka ndiwo maitiro atinoita sarudzo yedu, sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi.
Iye zvino tichaona dialog box uye tinokwanisa kunyora kukosha mubhokisi. Isu tinonyora 25000. Iwe haufanirwe kunetseka nezvemakomichi kana chero chinhu uye nekuita, zvinoshanda zvirinani kana ukango nyora muhuwandu huwandu.
Mushure mekudzvanya "Zvakanaka" tichaona kuti zviminda zvacho zvinongoerekana zvapendwa zvichienderana nesarudzo yedu (kurudyi) mubhokisi redu rakanzi "Chikuru Kupfuura". Mune ino kesi, "Chiedza Tsvuku Zadza neRima Rima Chinyorwa). Isu tingave takasarudza imwe yekuratidzira sarudzo zvakare.
Uku kugomeka kwemamiriro ezvinhu inzira huru yekuona, pakatarisa, data rakakosha kune rimwe purojekiti kana rimwe. Mune ino kesi, tinogona kuona iyo "Segment" (sezvavanorehwa muExcel Muenzaniso faira) iyo yakakwanisa kudarika madhora zviuru makumi maviri nezvishanu mukutengesa Gross.
Kushanda Nemaforamu uye Mabasa
Kudzidza maitiro ekushandisa mabasa muExcel kunobatsira chaizvo. Iwo ndiwo manyorero ekutanga emafomula. Kana iwe uchida kuona kunyorwa kwemabasa kuti uwane pfungwa yezvinowanikwa, tinya pane "Insert" menyu / boka uye kuruboshwe kuruboshwe, sarudza "Basa / Mabasa."
Kunyangwe chinangwa cheiyi bhatani muExcel Ribbon ndechokuisa basa chairo (iro rinogona kuitwawo nekunyora mu formula bar, kutanga nechiratidzo chakaenzana uye wozotanga kunyora basa raunoda), tinogona zvakare kushandisa izvi kuti uone zviripo. Iwe unogona kupururudza kuburikidza nemabasa kuti utore rudzi rwepfungwa rwe izvo zvaunogona kushandisa mune zvako mafomula.
Chokwadi, zvinobatsira zvakare kungoedza ivo kuti vaone zvavanoita. Iwe unogona kusarudza boka raunoda kutsvenesa nekusarudza chikamu, se "Chaizvoizvo Zvinoshandiswa" kune rakapfupiswa runyorwa rwemabasa asi runyorwa runowanzo shandiswa (uye kune mamwe mabasa akafukidzwa mune ino chinyorwa).
Tichange tichishandisa mamwe eaya mabasa mumienzaniso yemafomasi atinokurukura munyaya ino.
Zvakafanana = chiratidzo
Chikwangwani chakaenzana (=) chakakosha kwazvo muExcel. Inotamba yakakosha. Izvi zvinonyanya kuitika mune zviitiko zvemafomula. Chaizvoizvo, iwe hauna formula usati wautungamira une chiratidzo chakaenzana. Uye pasina formula, inongova iyo data (kana zvinyorwa) iwe wapinda muchitokisi icho.
Saka ingo rangarira kuti usati wabvunza Excel kuti ikuverenge kana kuita chinhu chero chako, kuti unonyora chiratidzo chakaenzana (=) muchitokisi.
Kana iwe ukasanganisira chiratidzo che $, izvo zvinotaurira Excel kuti isafambisa fomula. Kazhinji, kugadziriswa kwema auto mafomula (uchishandisa izvo zvinodaidzwa kunzi cell cell mareferensi), kuchinja mune pepa rekushandira, chinhu chinobatsira asi dzimwe nguva ungasazvida uye neiyo $ sign, unokwanisa kuudza Excel izvozvo. Iwe unongoisa iyo $ pamberi petsamba uye nhamba yenharembozha.
Saka hukama hwesero remunhu weD25 hunova $ D $ 25. Kana chikamu ichi chichivhiringidza, usazvidya moyo nazvo. Iwe unogona kudzoka kwazviri (kana kutamba nazvo neExcel isina bhuku rebasa).
Iwo Anotyisa Ampersand >> &
Iyo ampersand (&) ndeye inonakidza diki fomula "chishandiso," ichikubvumidza iwe kuti ubatanidze maseru. Semuenzaniso, ngatiti iwe une ikholamu yemazita ekutanga uye imwe ikholamu yemazita ekupedzisira uye iwe unoda kugadzira ikholamu yezita rakazara. Unogona kushandisa & kuita izvo chete.
Ngatimbozviedza muExcel Worksheet. Semuenzaniso uyu, ngatishandisei mapepa asina chinhu kuti tirege kukanganisa chero chirongwa. Enderera mberi wonyora zita rako rekutanga muA1 uye nyora zita rako rekupedzisira muB1. Iye zvino, kuvasanganisa, tinya mbeva yako paC1 cell wobva wapa fomu iyi: = A1 & "" & B1. Ndokumbirawo kushandisa chete chikamu mune italics uye kwete chero zvimwe zvacho (sokusashandisa nguva yacho).
Chii chaunoona muC1? Iwe unofanirwa kuona zita rako rizere rakazara nenzvimbo pakati pemazita ako ekutanga neokupedzisira, sezvingaite zvakajairika mukunyora zita rako rizere. Iyo & "" & chikamu cheiyo fomula ndiyo yakaburitsa iyo nzvimbo Dai iwe usina kusanganisira "" ungadai uine zita rako rekutanga uye rekupedzisira pasina nzvimbo pakati pavo (enda kumberi wozviedza kana iwe uchida kuona mhedzisiro).
Imwe fomula yakafanana inoshandisa CONCAT asi isu tichazodzidza nezvazvo zvishoma gare gare. Parizvino, ramba uchifunga izvo izvo ampersand (&) inogona kukuitira iwe sezvo ichi chidiki chidiki chinouya chinobatsira mune akawanda mamiriro.
SUM () Basa
Iyo SUM () basa rine hushoma uye rinoita zvarinenge richitsanangura. Iyo inowedzera kumusoro iyo nhamba iwe unotaurira Excel kuti ubatanidze uye inokupa iwe huwandu hwehuwandu hwavo. Iwe unogona kuita izvi nenzira dzinoverengeka.
Takatanga nekunyora mune dzimwe nhamba saka taive tine imwe data yekushanda nayo mukushandiswa kweiyo basa. Isu takangoshandisa 1, 2, 3, 4, 5 uye takatanga muA1 ndokunyora muchitokisi chimwe nechimwe chichienda pasi takananga kuma A5.
Zvino, kushandisa SUM () basa, tanga nekudzvanya muchitokisi chaunoda, mune iyi nyaya takashandisa A6, uye taipa = SUM (mune fomura bar. Mune uyu muenzaniso, mira kana iwe uchisvika kune yekutanga "(." Iye zvino tinya muA1 (iyo yepamusoro-sero yakawanda) uye dhonza mbeva yako kuenda kuA5 (kana zasi-yakawanda foni yaunoda kuisa) uye wobva wadzokera ku formula bar wonyora yekuvhara “).” Usasanganisira nguva kana makotesheni emakotesheni uye chete mababa.
Imwe nzira yekushandisa basa iri ndeyekunyora manhamba ruzivo rwuri muforoma bar. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uine huwandu hwakati wandei uye kuprinta kuti uzvibate zvakaoma. Tanga iyi nzira nenzira imwechete yawakaitira iyo muenzaniso pamusoro, ne "= SUM (."
Wobva wonyora yepamusoro-yakawanda sero rechitokisi. Mune ino kesi, izvo zvinogona kunge zviri A1. Sanganisira colon (:) uye wozonyora pasi-yakawanda yesero renhare. Mune ino kesi, izvo zvinogona kunge zviri A5.
KUSVIRA () Basa
Ko kana iwe waida kufunga kuti avhareji yeboka rehuwandu yaivei? Iwe unogona kuita zviri nyore izvo neAVERAGE () basa. Iwe unozoona, mumatanho pazasi, kuti zvakangofanana neSUM () basa riri pamusoro asi riine rimwe basa.
Uine izvozvo mupfungwa, tinotanga nekusarudza sero ratiri kuda kushandisa mugumisiro (mune ino A6) uye tobva tatanga kunyora nechiratidzo chakaenzana (=) uye neshoko AVERAGE. Iwe unozoona kuti iwe paunotanga kuinyora iwe unopihwa mazano uye unogona kudzvanya paAVERAGE pane kunyora izwi rizere, kana uchida.
Ita shuwa kuti iwe une yekuvhurika patubatsiro mufomula yako tisati tawedzera masero edu. Kana zvisina kudaro, iwe uchagamuchira kukanganisa.
Izvozvi zvatava ne "= AVERAGE (" typed in A6 cell (kana chero cell yauri kushandisa yemhedzisiro) tinogona kusarudza cell renzvimbo yatinoda kushandisa. Mune ino nyaya tiri kushandisa A1 kusvika A5.
Ramba uchifunga kuti iwe unogona zvakare kunyora mumanyorerwo pane kushandisa mbeva kusarudza iyo mhando. Kana iwe uine data hombe raiswa typing muhuwandu pamwe nyore nyore pane kupuruzira izvo zvaizodikanwa kuti uzvisarudze. Asi, zvechokwadi, zviri kwauri.
Kuti upedze kuita izvi ingo nyora mune yekuvhara mabereki ")" uye uchagamuchira avhareji yenhamba shanu. Sezvauri kuona, iyi nzira yakafanana chaizvo neSUM () maitiro uye mamwe mabasa. Ukangowana hangoma yeimwe basa, iyo vamwe ichave nyore.
COUNTIF () Basa
Ngatiti isu taida kuverenga kuti kangani imwe nhamba inoratidza kumusoro kwe data set. Chekutanga, ngatigadzirirei faira redu rekuita kuitira kuti tive nechimwe chinhu chekuverenga. Bvisa chero fomula yaungave uinayo muA6. Iye zvino, ita kopi A1 kuburikidza A5 uye unama kutanga mu A6 kana ingo nyora nhamba dzakafanana mumaseru uchienda pasi uchitanga neA6 uye kukosha kwe1 uye wozoita A7 uine 2, nezvimwe.
Iye zvino, muA11 ngatitangei basa redu / formula. Muchiitiko ichi, tiri kuzonyora "= COUNTIF (." Zvadaro, isu tinosarudza masero A1 kusvika A10.
Ive nechokwadi chekuti iwe unonyora kana kusarudza "COUNTIF" uye kwete imwe yemamwe ma-akafanana-mabasa e-kana isu hatizoiwana iwo mhedzisiro.
Tisati taita senge tine mamwe mabasa edu, uye tinya mhinduro yekuvhara ")" tinofanirwa kupindura mubvunzo wekuti uye ndokunyora uyo, mushure megurameti "," uye pamberi pevabereki ")."
Chii chinotsanangurwa ne "maitiro?" Ndiko kwatinoudza Excel zvatiri kuda kuti zviverenge (mune ino nyaya). Takanyora comma tobva taita "5" uyezve yekuvhara mabereki kuti tipe kuverenga nhamba yevashanu (5) inoonekwa mune runyorwa rwehuwandu. Mhedzisiro iyoyo inogona kunge iri mbiri (2) sezvo paine zviitiko zviviri.
CONCAT kana kuConitor () Basa
Zvakafanana nemuenzaniso wedu uchishandisa chete ampersand (&) mune yedu fomula, unogona kusanganisa maseru uchishandisa iyo CONCAT () basa. Enda mberi uye uedze, uchishandisa yedu imwecheteyo muenzaniso.
Nyora zita rako rekutanga muA1 uye zita rako rekupedzisira muB1. Zvadaro, mune C1 mhando yeCONCAT (A1, "", B1).
Iwe uchaona kuti iwe unowana mhedzisiro yakafanana nezvatakaita ne ampersand (&). Vanhu vazhinji vanoshandisa ampersand nekuti zviri nyore uye zvishoma zvinonetsa asi ikozvino iwe unoona kuti iwe zvakare une imwe sarudzo.
Ongorora: Iri basa rinogona kuve RINOGUNGA mune yako vhezheni yeExcel. Microsoft yakapfupisa zita rebasa kungoitaCONCAT uye iyo inowanzoita nyore kunyora (uye yeuka) mune yakazotevera shanduro software. Neraki, kana ukatanga kunyora ConCA mubhajeti rako remafomula (mushure mechiratidzo chakaenzana), iwe uchaona kuti ndechipi chinyorwa chinoshandiswa neshanduro yako yeExcel uye chinogona kuchisarudza nekudzvanya nacho negonzo ..
Yeuka kuti kana iwe uchitanga kunyora iyo, kubvumira yako vhezheni yeExcel kuratidza chaiyo basa, kungo nyora "ConCA" (kana ipfupi) uye kwete "ConCAN" (sekutanga kweCONCANTENATE) kana ungatadza kuona zano raExcel sezvo ndipo panotangira misiyano miviri.
Usashamiswe kana iwe uchida kushandisa iyo merge nzira ne ampersand (&) pane CONCAT (). Izvo zvakajairika.
Kana / Ipapo Maitiro
Ngatiti isu tinoda kushandisa iyo Kana / Ipapo Fomula kuti tizive Discount (rudzi rwechipiri reputi) huwandu mukoramu nyowani mune yedu Muenzaniso Excel faira. Muchiitiko ichocho, tinotanga isu nekuwedzera kodhi uye tiri kuiwedzera mushure meColumb F uye pamberi peColumb G (zvakare, mune yedu yefaira yemuenzaniso faira).
Zvino, isu tinonyora mufomura. Mune ino kesi, isu tinonyora mukati F2 uye iri "= IF (E2> 25000," DISCOUNT 2 "). Izvi zvinozadzisa izvo fomura iri kutsvaga nemuyedzo (E2 yakakura kupfuura 25k) uyezve mhedzisiro kana nhamba iri muE2 ikapasa bvunzo iyoyo ("DZIDZO 2").
Iye zvino, kopira F2 uye unike mumaseru anozviteera mu F iri.
Fomula yacho inozozvigadzirisa yega yega sero (hama inodzvinyirira cell), ihwo hunongedzo kuchitokisi chakakodzera Yeuka kuti kana iwe usiri kuda kuti ichinge yagadzika, unogona kutungamidza cell alpha nechiratidzo che $ pamwe nehuwandu, seA1 i $ A $ 1.
Iwe unoona, mumufananidzo uri pamusoro, kuti "DisCOUNT 2" inowanikwa mumasero ese ari mu F2 ikholamu. Izvi zvinodaro nekuti formula yacho inoiudza kuti itarise iyo E2 cell (inomiririrwa ne $ E $ 2) uye isina masero ehama. Saka, iyo formula painoteedzerwa kune inotevera sero (kureva F3) ichiri kutarisa kune E2 cell nekuda kwemadhora chiratidzo. Saka, ese masero anopa zvakafanana mhedzisiro nekuti ine yakafanana fomati inoreva yakafanana sero.
Zvakare, kana iwe uchida kukosha kuratidzira panzvimbo peshoko, "FALSE," ingo wedzera comma uyezve iro zita kana nhamba yaunoda kubuda (rugwaro runofanira kunge ruri muzvirevo) kumagumo efomura, pamberi magumo evabereki.
Pro Tip: Shandisa VLOOKUP: Tsvaga uye uwane kukosha muchitokisi chakasiyana zvichienderana nezvimwe zvinyorwa zvakafanana mukati memutsara mumwe chete.
Kugadzirisa Zvako zveExcel Pro
Neraki, nenzira iyo magwaro eExcel akagadzirwa, iwe unogona kuita zvakati wandei neExcel Workbooks yako. Iko kugona kuve nemashamba ekushandira akasiyana (ma tabo) mune yako gwaro kunokubvumira kuti uwane zvinoenderana nezvose zviri mune rimwe faira. Zvakare, kana iwe uchinzwa kuti uri kugadzira chimwe chinhu chingave nemafomati anoshanda zviri nani (kana zvakanyanya kutyisa) unogona kutevedzera (kurudyi-batira sarudzo) yako Yekushandira mabheki (tabo) kuve neshanduro dzakasiyana dzePepa Rako rekushandira.
Unogona kutumidza mazita ako zvekare, uye kushandisa kodhi yemodhi kukuzivisa iwe kuti ndedzipi shanduro dzinyowani (kana dzechinyakare). Uyu unongova mumwe muenzaniso wekuti iwe ungashandise sei iwo mabhuki kune yako mukana mukugadzirisa yako Excel mapurojekiti.
Heino muenzaniso wekutumidza mazita ako matabhu mune imwe yedzidziso dzakazotevera dzeExcel. Iwe unotanga nekudzvanya pane iyo tabu uye iwe unowana mhedzisiro yakafanana nemufananidzo pano:
Kana iwe ukasawana mhinduro iyoyo, zvakanaka. Iwe unogona kunge uine yekutanga shanduro yeExcel asi ine imwe yakajeka nenzira iyo inobvumidza iwe kuti uitorezve ma tabo. Iwe unogona kuridza-tora kurudyi pawebhu uye kuwana sarudzo yekuti "titore zvekare" mune zvekare shanduro dzeExcel, zvakare, uye dzimwe nguva ingo taura zvakanaka mubhi.
Excel inokupa iwe mikana yakawanda kwazvo murwendo rwako mukudzidza maitiro ekushandisa Excel. Zvino yave nguva yekuenda kunze uye kuishandisa! Nakidzwa.
Mashandisiro Ekushandisa Excel SaPro: 18 Nyore Excel Matipi, Matipi, & Mapfupi
Maitiro Ekudzidza Excel Pamhepo: 17 Mahara uye Inobhadharwa Zviwanikwa zveExcel Kudzidziswa
The Ultimate Guide kuGoogle Sheets
12 Basic Excel Mabasa Anofanira Kuziva Wese
Maitiro Ekuyambuka Refer Cell Pakati Pakati Excel Spreadsheets
Hewa mabasa ekutanga e24 mu Microsoft Excel Unofanira Kuishandisa
Maitiro Ekunyora Macro muExcel
13 Yakakosha Excel Mabasa eKupinza Dhata
Filed Under: masana koyon kudarika